आयोडिनको कमी छ या छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउने ? - आयोडिनको कमी छ या छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउने ? -
आयोडिनको कमी छ या छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउने ?
काठमाडौँ । शरीरमा प्रत्येक तत्त्वको सन्तुलित मात्राले तपाईंलाई फिट राख्छ र तपाईं रोगहरूको संक्रमणबाट पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यस्तै एउटा तत्व आयोडिन हो। खानामा यसको सन्तुलित मात्रा हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आयोडिनको कमीको कारण हुने रोग मध्ये एक थाइरोइड हर्मोनको अभाव हो।
आयोडिनले थाइरोइड ग्रंथिलाई राम्रोसँग कार्य गर्न मद्दत गर्दछ। आयोडिनले मस्तिष्कको विकासमा मद्दत गर्दछ र वजन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। आयोडिनको उत्तम स्रोत नुन हो। आउनुहोस् केहि विशेष चीजहरू थाहा पाउनुहोस्।
आयोडिन कमीको लक्षण
– कमजोरी वा थकान महसुस
– कपाल झर्ने वा कपाल कम हुनु
– कुनै कुराहरु छिटो बिर्सनु
– गर्भावस्था सम्बन्धी जटिलता
आयोडिन कमीका कारण हुने रोगहरु
– लगातार कमजोरी र थकान
– गर्भावस्थाको समयमा समस्या
– असामान्य वजन बढ्नु
आयोडिनको कमीलाई पार गर्न यी चीजहरू सेवन गर्नुहोस
– ब्राउन राइस
– माछा, अण्डा